ख्रीष्टमस र येशू - Nepali Christians Site
ख्रीष्टमस र येशू
Posted by Resham Kumar sunuwar on December 23, 2013 at 12:06am
यी दिनहरुमा हामीले येशूको जन्म अथवा ख्रीष्टमसको उत्सवमा रमाईरहेका छौं । ख्रीष्टमसको कुरा गर्दा यो जहिले पनि येशूको जन्मको कुरासँगै जोडिएको छ । येशूको जन्मले नै हामी मानव जातिले उद्धार पाउने बाटो भेट्टाउन सकेका छौं । उहाँमा शान्ति अनि आनन्द पाएका छौं । येशू मानिसको रुपमा हाम्रो लागि उद्धार गर्नलाई यस पृथ्वीमा नआउनुभएको भए हाम्रो जीवन निश्चय पनि अन्यौलमा पर्ने थियो । मानिस जातिलाई उहाँले प्रेम गर्नुभएकोले उहाँको एकलौटे पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनुभयो । हामीमा उहाँको उद्धार आओस् । हामीमा उहाँको शान्ति आओस् र जीवन आओस भन्ने कुरा परमेश्वरको योजना रहेको छ । हामीले मत्ती १:२१ बाट येशूको जन्मको विषयमा मनन गर्नेछौं ।
“तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछ्नि र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौं, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरुलाई तिनीहरुका पापबाट बचाउनुहुनेछ ।” मत्ती १:२१
यहाँ योसेफको मगनी मरियमसँग भएको थियो । तर यिनीहरुको विवाहचाहिं भईसकेको थिएन । मरियमचाहिं एउटा कन्या स्त्री थिईन । जतिबेला मरियम पवित्रआत्माको छाया परेर गर्भवती भईन् । यो कुरा चाल पाएर योसेफले मनमनै निर्णय गरे कि अब म मरियमलाई विवाह गर्दिन । यसलाई म त्यागी दिन्छु । त्यतिबेला एक प्रकारले योसेफको लागि चुनौती भएको थियो । गाह्रो र असजिलो पनि भएको थियो । कि आफुले मगनी गरेको स्त्री विवाहै नगरी गर्भवती हुन्छन् भने यसलाई कसरी स्वीकार गर्ने? यस्तै यस्तै कुराहरु मनमा खेलाउँदै मनमनै योसेफले बिचार गरे कि अब म मरियमलाई त्यागी दिन्छु । योसेफचाहिं धार्मिक मानिस भकोएकोले मरियमलाई वेईज्जत नगरीकन त्यागीदिन्छु भनेर भनेका थिए । समाजिक र नैतिक रुपमा योसेफको लागि मात्रै होईन मरियमको लागि पनि जीवनमा धेरै कठिन घडी भएर जानु परेको थियो । एउटा कन्या स्त्री पवित्र आत्माको छाया पररे कुनै पनि पुरुषसँग सम्बन्ध नगरी गर्भवती हुँदा भोग्नु परेका समस्याहरु पनि आफ्नै प्रकारका थिए होलान् । यासेफले मरियमलाई त्यागीदिन्छु भनेर मात्र के सुतेका थिए । सपनामा परमेश्वरको स्वर्गदूत प्रकट भएर योसेफ मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराउ । किनकि मरियमचाहिं पवित्र आत्माबाट गर्भवती भएकी छिन् । यो परमेश्वरको योजनाअनुसार उहाँको काम पुरा गर्नलाई उहाँले मरियममाथि निगाह भएको छ भन्ने सन्देश दिएका थिए । वास्तवमा योसेफ डराएका थिए । उनमा थुप्रै प्रकारका डरको आत्माले सताईरहेको थियो । मैले मगनी गरेकी मरियम विवाहै नगरी गर्भवती बनिन् । अब के हुन्छ होला? मेरो भविष्य र जीवनमा पनि नराम्रो असर पर्छ होला भन्ने कुराको डरमा बाँचीरहेका थिए । तर स्वर्गदूतले योसेफलाई भन्छन् कि योसेफ तिमी नडराओ । यी सबै परमेश्वरको काम हो । परमेश्वरको योजना अब तिमीहरुको जीवनबाट पुरा भईरहेको छ । नडराओ । यासेफलाई सन्तवना दिएको कुरा थाहा गर्दछौं ।
योसेफलाई भनिएको थियो । मरियले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् । र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौं, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरुलाई तिनीहरुका पापबाट बचाउनुहुनेछ ।
यहाँ मरियमले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ । प्रायजसो कुनै पनि बच्चाको नजन्मीकन नाम नै राख्दैनन । कुनै पनि बच्चा जन्मिदा उनीहरुको आमा बाबुले नाम दिन्छन् । अथवा मण्डलीमा अर्पण गर्दा नाम राखिन्छ । तर यहाँ त येशू जन्मिनु भन्दा अगाडि नै उनको नाम राखिएको छ । नाम पनि परमेश्वरबाट नै राखिएको पाउँदछौं । येशू नाउँ चाहिं हिब्रु नाउँ यहोशूको ग्रीक अनुवाद हो । येशू र यहोशूको अर्थ प्रभुले उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ ।
त्यो समयमा हिब्रु विचार अनुसार कुनै पनि नामले गहन किसिमको अर्थ बोकेको हुन्थ्यो । नामले त्यो व्यक्तिको चरित्र, व्यतित्व अनि कामहरु झल्काउँथ्यो । हामी नाम राख्दा खासै त्यसको अर्थको विचार गर्दैनौं । अनि नामको अर्थको महत्व पनि राख्दैनौं । जस्तो कि नामअनुसारको काम पनि मिल्दैन । जो मान्छे लुते डर छेरुवा छ त्यही मान्छेको नाम वीर वहादुर हुन्छ । जो मान्छे अरुप्रति खासै दया माया अनि प्रेम देखाउदैन उसको नाम प्रेम वहादुर अथवा प्रेम कुमारी हुन्छ । जो मान्छे अति नै हुस्सु अनि बुद्धु हुन्छ उसको नामचाहिं बुद्धिबहादुर अथवा बुद्धिमाया हुन्छ । जो मान्छे सा¥हो घमण्डको पोकाले फुलीरहेको हुन्छ त्यो मान्छेको नाम नम्रता माया हुन्छ । अथवा जो मान्छे कङ्गाल हुन्छ त्यो मान्छेको नाम धन कुमारी या धन कुमार हुन्छ । कसैले सोमबार जन्मेको भनेर सोमे अनि सोम माया अनि आईतबार जन्मेयो भनेर आईत कुमार या आईती माया भनेर बार अनुसार नाम राखी हाल्छन् । खासमा हामी नामको अर्थ, त्यसको महत्वप्रति चासो हुँदैन । तर यहूदीहरुको लागि चाहिं त्यो नामको अर्थ, त्यस नाम अनुसारको चरित्र, व्यक्तित्व अनि काम हरेक कुरा नै त्यो नाममा जोडिएको हुन्थ्यो । बाइबलमा भएका हरेक व्यक्तिको नामले त्यो नामको अर्थ अनि त्यो व्यक्तिको चरित्र अनि काम झल्काउँथ्यो । सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै कुरा नाममा भल्केको हुन्थ्यो । येशू नामको अर्थ उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने थियो । येशूको नामले त्यो नामअनुसारको अर्थ, व्यक्तित्व अनि काम पनि झल्काएको थियो ।
यो येशू नाममा के त्यस्तो विशेषता छ ? किन येशू नाम राखियो त? किनकि येशू नामचाहिं धेरै महत्वपुर्ण र शक्तिशाली नाम थियो । फिलिप्पी २:९ मा भने जस्तै “त्सैकरण परमेश्वरले अति उच्च पार्नुभयो । र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो, जो हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ ।” निश्चय पनि येशू नाम सबै नाम भनदा उच्च छ । यो नामको अगाडि सबै अधीनमा आउनु पर्दछ । किनकि येशूको नाम जस्तो अरु नाम संसारमा छैन जसमा ईश्वरीय शक्ति रहेको होस् । यो कुनै पनि नामहरु भन्दा पनि फरक प्रकारको नाम थियो । निककि यो येशू नाम सबै भन्दा उच्च नाम हो । यो नाम उदेकको नाम हो । यो नाममा भूत आत्माहरु भाग्दछन् । यो नाममा रोगी विरामीहरु निको हुँदछन् । यो नाममा मानिसहरुले शैतानमाथि विजय पाउँदछन् । त्यसैकारण येशू नामको अर्थ नै आम मानव जातिको लागि अति नै महत्वपूर्ण छ । कुनै नाममा भूतहरु भाग्दैनन् । केवल येशूको नाममा मात्रै दुष्टआत्माहरु भाग्दछन् । येशूको नाममा शक्ति छ । किनकि येशूले उहाँको मानिसहरुको पापबाट उद्धार गर्नुहुन्छ अनि पापबाट बचाउनुहुन्छ । प्रेरित ४:१२ ले भन्छ कि “अरु कसैमा मुक्ति छैन । किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमूनि मानिसहरुमा अर्को कुनै नाउँ दिईएको छैन ।” केवल येशूमा मात्र मानिसहरु मुक्ति छ । पाप क्षमा छ । अनि पापबाट उद्धार छ ।
येशू जब जन्मनुहुन्छ तब उहाँले आफ्ना मानिसहरुलाई तिनीहरुका पापबाट बचाउनुहुनेछ भनेर भनिएको थियो । आज संसारमा मानिसलाई चाहिएको महान खाँचोचाहिं तिनीहरुको पापबाट उद्धार पाउनु हो । त्यसैले हामी सबैको लागि उद्धार गर्नलाई येशू जन्मनुभएको कुरा यहाँ बताईएको छ । येशूमा मानव जातिको लागि आशा छ । उहाँमा मानव जातिको पापको उद्धार छ । उहाँले नै हाम्रो पापबाट हामीलाई बचाउनुहुन्छ ।
यशूको नाम पुकार्नेहरु बाचाईनेछन् । रोमी १०:१३ ले भन्छ, “किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ ।” निश्चय पनि यो नाउँ आपैmमा महत्वको छ । आज पनि येशू नाममा शक्ति छ । त्यसैले त हामी येशूका नाममा चङ्गाई होस् । येशूको नाममा दुष्ट आत्मा निस्की जा भनेर भन्छौं । अरु कुनै पनि नाममा उद्धार छैन । छुटकारा छैन अनि शान्ति र आनन्द छैन । आशा छैन । केवल येशू नाममा मानिस जातिको पाप क्षमा छ अनि आशा छ ।
योसेफ र मरियम दुवैलाई कठिनाई भएको थियो । धेरै प्रश्नं.हरु मनमा उठीरहेका थिए । प्रभु किन हाम्रो जीवनमा यस्तो भईरहेछ । तर यी सबै कठिनाईहरुको बीच परमेश्वरले सबै मानव जातिकै लागि एउटा असाधारण काम गर्नु भएको थियो । उहाँले हरेक मानव जातिको लागि उहाँको प्रेम देखाउनुभएको थियो ।
हामी आफै पापबाट उमकन सक्दैनौं । हामी आफै हाम्रो जीवनको खराव बानी र पाप स्वभावबाट भागेर जान सक्दैनौं । तर आज हामीले ख्रीष्टमसको यो समयमा येशूको जन्मको कुराले यही कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौं कि हामी येशूद्धारा पापमाथि विजय गर्न सक्दछौं । हामीलाई थाहा छ, बाइबलमा येशू आउनु भएपछि कति अचम्म अचम्मका कामहरु भएका थिए । येशूका नाममा अशुद्ध आत्माहरु निस्केर भागे । येशूको नाममा मृतकहरु बौरी उठे । येशूको नाममा भूतहरु मानिसहरुको जीवनबाट निस्केर भागे । येशूको नाममा रोगी बिरामीहरु निको भए । किनकि येशूको जन्मले सबै मानव जगतमा आनन्द, शान्ति र मुक्ति आयो ।
आज हामी यो कुरालाई याद गरौं । येशूको जन्मको बेला कन्य कुमारी मरियमको कोखमा येशू पवित्रआत्मबाट गर्भवती बनेकी थिईन् । उनले धेरै कठिनाई र अप्ठयारा अवस्थाको सामना गर्नु परीरहेको थियो । योसेफलाई त्यतिकै गा¥हो अनि डर परीरहेको थियो । तर येशू आउने उद्धेश्य, कारण सबै कुराले गर्दा परमेश्वरप्रति तिनीहरुले विश्वास भरोसा गरे । उनीहरुको जीवनमा परमेश्वरको काम अचम्म तरिकाले भयो । अनि ईतिहासमा उनीहरुको नाम अंकित भयो । येशूमा तपाइको लागि आनन्द र शान्ति छ । येशूको नाममा अनन्त जीवन र मुक्ति छ । यस अर्थमा ख्रीष्टमस र येशूको जन्मको कुरा एक आपसमा सम्बन्धित छन् र यसले मानव जातिको लागि परमेश्वरको प्रेम प्रकट भएको छ । परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन् । ह्यापी ख्रीष्टमस र नयाँ बर्ष २०१४ को शुभकामना..।
Comment by Resham Kumar sunuwar on December 25, 2013 at 9:22am dhanybad hai aruna ji same to you Comment by अरुणा राई ! on December 25, 2013 at 7:56am येशूको नाममा अनन्त जीवन र मुक्ति छ यसै महान येशु ख्रीष्टको जन्म दिनमा तपाईलाई पनि बडादिनको शुभ-कामना छ है रेशम्ज्यु ! Merry christmas . RSS